१६ वर्षसम्म भोक हडताल गरेकी इरोमले कहिलेदेखि खाना खान सक्छिन् त ?
१६ वर्षसम्म अनशनमा बसेकी इरोम शर्मिलाले सामान्य रुपमा खानपीन गर्न कहिले देखि सक्लिन् ? अहिले हरेकको चासोको विषय यही नै बनेको छ ।
प्रेमीसँग २० दिन लामो डेटका लागि सुटुक्क न्युजिल्याण्ड उडिन नम्रता !
काठमाडौं—चकलेटी नायिका नम्रता श्रेष्ठ प्रेमी दावा स्टीभन शेर्पासँग अहिले डेटिङमा ब्यस्त छिन् । उनीहरुको जोडी लामो डेटका लागि न्युजिल्याण्ड पुगेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
माधव नेपालले भने, 'देउवाको अभिब्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेन'
गौर (रौतहट)-नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको कुरा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बताएका छन् ।
तमलोपामा पदाधिकारीको टुङ्गो, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हृदयेश त्रिपाठी
काठमाडौँ-तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले महाधिवेशन सकिएको झन्डै दुई महिनापछि पदाधिकारी तथा थप केन्द्रीय सदस्यको टुङगो लगाएको छ । असारको पहिलो साता नवलपरासीमा सम्पन्न महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिमा रहेका बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
भारतले लगायो १९ नेपालीमाथि हत्याको आरोप
नवलपरासी, २७ साउन । नवलपरासीको सुस्ताका १९ जना सर्वसाधारण नेपाली भारत जान असुरक्षित भएका छन् ।
यी चाइनीज अभिनेत्रीसँग रोमान्स गर्दैछन् सलमान खान
मुम्बइ– बलिउड दवंग खान अब विदेशी अभिनेत्रीसँग रोमान्स गर्दै देखिने भएका छन् ।
पूर्व सांसदलाई मृत्युदण्ड र अरु सातलाई जन्मकैद
ढाका, साउन । बङ्गलादेशको युद्ध अपराधसम्बन्धी एक विशेष अदालतले यहाँका एक जना पूर्वसांसदलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
अस्पतालको प्रसूति वार्डमा आगलागी, बाह्र नवजात शिशुको मृत्यु
इराक, साउन । बग्दादस्थित एक अस्पतालको प्रसूति गृहमा हुँदा १२ शिशुको मृत्यु भएको इराकी अधिकारीले बुधबार जनाएका छन् ।
रियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा अमेरिकालाई चीनको चुनौती
ब्राजिलमा जारी रियो ओलम्पिकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पदक संख्या ३० पुर्याएको छ ।
स्थानीय तहको काम रोक्न खोज्दै संघीय मोर्चा
काठमाडौं–मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कामकारबाही रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीयस्तरमा गरिरहेको छलफल रोक्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।
Page 2849 of 3554
भारतीय नागरिकता नभएका बलिउडका हिट कलाकारहरु
रात्रि बस दुर्घटना हुँदा १ काे मृत्यु, १० घाइते
इँटाभट्टाका मजदूरलार्इ कस्ले हान्याे गाेली ?
एजेन्सी । सुन्दर अनुहार देख्दा मानिसहरु नकारात्मकता विर्सन्छन् ।
यी हुन् भारतीय मुलका चर्चित १२ 'पोर्न स्टार'